Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan Ka Soo Baxay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya (JWXO).
Bayaan Ka Soo Baxay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya (JWXO).
Posted by Daljir	/ January 23, 2019
Bayaan ka soo baxay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya JWXO
Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somali State (Ogadenya) waxay xaq sharci ah u leeyihiin inay ka tashadaan arrimahooda siyaasadeed iyo nidaamka ismaamulka ee ku qeexan dastuurka Itoobiya iyo shuruucda caalamiga ah.
Xuquuqaha kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxaa kamid ah in dadku ay si xor ah u doortaan madaxdooda. Waxaa intaas dheer iyadoo ra’iisal wasaare Abiy uu ku baaqay in uu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee bulshada iyo in uu hirgeliyay furfurnaan siyaasadeed.
JWXO waxay xisbiga talada haya iyo dowlada federaalka ahba ugu baaqaysaa inay ixtiraamaan doonista iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed oo ay iska ilaaliyaan tallaabo kasta oo carqaladayn karta xasilloonida maamul goboleedka Soomaalida iyo danaha shacabka.
Khilaaf kasta oo siyaasadeed oo yimaada waa in si daah-furan loo xalliyo iyadoo la gala tashanayo dhammaan dhinacyada saamaynta ku leh xalinta iyo xasilinta khilaafka jira.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) waxaa ka go’an inay nabadgeliyo iyo dimuqraadiyad ka hirgeliso deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba Itoobiya, waxayna dhinacyada saamaynta leh oo idil ugu baaqaysaa inay mabaadii’daas u hoggaansamaan.
Ugu dambayntii, JWXO waxay ugu baaqaysaa xisbiga talada deegaanka ha ee soomaaliyeed inay iyagu xallistaan is afgaran-waa kasta oo gudohooda ah.